King Zero: ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်ဆရာတော်ဦးဂန္ဘီရနှင့် ကြုံဆုံခဲ့သမျှ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသူ တကာကြီးဦးလင်းပြန်ပြောချက် အရှင်ပညာနန္ဒက ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ် မြောက် အထိမ်းအမှတ် တင်ဆက်သည်
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်ဆရာတော်ဦးဂန္ဘီရနှင့် ကြုံဆုံခဲ့သမျှ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသူ တကာကြီးဦးလင်းပြန်ပြောချက် အရှင်ပညာနန္ဒက ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ် မြောက် အထိမ်းအမှတ် တင်ဆက်သည်
Posted by dhamma at 12:34 AM
ဆဌသံဂါယနာတင် ရေဒီယိုအစီအစဉ် ၊ တရားနာကြားရအောင်
ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသောဘဏမှမေး၍မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိကအရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသမှ ဖြေဆိုသည်။
စနေနေ့တိုင်း နံနက်၉နာရီမှ ၁၁ နာထိ တရားဓမ္မများတိုက်ရိုက်နားကြားနိုင်ပါသည်
Map FM Radio တရားနာကြားနိုင်ပါသည်။
Saffron Revolution Anniversary
၃ နှစ်မြောက်ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်
Ashin Issariya (kingzero)
မြန်မာပြည်သားများ အချင်းချင်း ပိုမိုချစ်ခင်ရင်းနှီးကြစေရန်နှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ပိုမိုချိတ်ဆက်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ကာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်များ အမည် ......လိပ်စာ........ ..... ဖုန်းနံပါတ်........... Email......... အတွေးအမြင်............များကိုဖေါ်ပြပေးစေလိုပါသည်။
စက်တင်ဘာ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်ပွဲ
စာပေပညာရှင်များအတွက် Myanmar E-Books
Map FM Radio
the best friend မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်
ငွေလှဲသည့် ဈေးနှုံး သိချင်ရင်
အမေး အဖြေ (16)
သိချင်သော မေးခွန်းများ မေး မည်ဆိုလျှင်
နှစ်တစ်ရာ မြန်မာပြက္ခဒိန် http://www.mmcalendar.com/
Ashin Pyinnar Nanda – အညတရ အကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ ...
ဦးနှောက် ပျက်ဆီးစေတဲ့ အချက် ၁၀-ချက်
Saffron Revolution Anniversary လေးနှစ်မြောက်ရွှေဝါ...
Saffron rally attracts 200 in Chiang Mai
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အထိမ်းအမှတ် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ...
Protestors in Rangoon mark fourth anniversary of t...
Dozens March in Rangoon to Mark Saffron Revolution...
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ရွှေဝါရောင် (၄)နှစ်ပြည့် အခမ်းအ...
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၄) န...
Saffron Revolution – An inside chronology of event...
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက် ဆရာတော် အရှင်ဣဿရိယ ၏ ၃၆ ...
နှစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်း တရုတ်တွေ သတ်သေဖို့ကြို...
အတွေးအမြင်စာစဉ်(၁၇၈) စာမကြေတတ်ယောင်ကား ပပျောက်ရေး...
အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အတွက် အပြင်အဆင်တွေ ရှိပြီလား...
မန္တလေး၌ သာသနာတော်အား သုတ်သင်သန့်ရှင်းရေးကို စတင်ဆေ...
4 th ANNIVERSARY SAFFRON REVOLUTION
Saffron Revolution Anniversary – 260 monks still i...
“I don’t want my parents to suffer from worry and ...
မြစ်ဆုံရေကာတာမှ ရရှိမယ့် အကျိုးဆက်များ (VOA သတင်းသ...
8888 People Power - Vol 8 No 8 - September 2011
သမ္မတ အကြံပေး ဦးမြင့် ဝေမျှတဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့...
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်ဆရာတော် ရုပ်ပုံလ...
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၅) ဆရာတော်ဦးအဂ္ဂဓမ္မ
ဦးဣဿရိယ နဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၄ နှစ်ပြည့် မေး...
ဧရာဝတီမြစ်ပျောက်ရင် တိုင်းပြည် ပျောက်မယ် မောင်စိန...
မြန်မာနိင်ငံသား ဦးဝင်းချို (ဆက်သွယ်ရန်ဖုံး။၀၁-၃၉၃...
ရုပ်ရှင်သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်...
Birthday Celebration at The Best Friend Library
မစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းမှ ကြားပွဲစားများအကြောင်း တစေ့တ...
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး မျိုးမစစ် ဇော်မင်း၏ အရှက်မဲ့စကားမျ...
လေးနှစ်ပြည့်တမ်းချင်း ဆောင်းပါးရှင် (စက်တင်ဘာ နေမိ...
2011 အကျဉ်းထောင် အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ...
The Best Friend 2011 မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်
The Life Of The Buddha [Full BBC Documentary- HQ]
သမိုင်းတဖြတ်အမြင်နဲ့ လူတတ်မလုပ်ချင်ပါနဲ့ တိုင်းပြည...
ဆရာအောင်သင်း (တာဝန်မကျေသော အစိုးရ၏ လက်အောက်နေရပြည်...
စာပေထဲက လူငယ်သမိုင်း (ဆရာအောင်သင်း)
မငိုပါနဲ့ ဧရာဝတီ [ဆောင်းပါးရှင် (အိမ့်ချမ်းမြေ့ )]...
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ တရားပွဲပိတ်ထားတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်...
မိခင်ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအား ၀ိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးနေကြသည့် ဗ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအား 2008 ခုနှစ်မှ စတင...